၂၀၁၆ စီးပွားရေး အနှစ်ချုပ် | dawnmanhon
၂၀၁၆ စီးပွားရေး အနှစ်ချုပ်
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုပပျောက်ရေး ကျားကုတ်ကျားခဲ့ ကြိုးပမ်းနေချိန် နိုင်ငံအပေါ် ချမှတ်ထားသည့် အရေးယူပိတ်ဆို့မှုများကို ဖြေလျော့ရုတ်သိမ်းပေးလိုက်သည့် အမေရိကန်တို့၏ ဆုံးဖြတ်ချက်ကြောင့် ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများကို လမ်းပွင့်သွားစေနိုင်ကြောင်းနှင့် ယခုအရွေ့ကို ကြိုဆိုပါကြောင်း ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်အစိုးရက ပြောသည်။ ဆယ်စုနှစ်များစွာကြာ စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကို အဆုံးသတ်စေခဲ့သည့် ယမန်နှစ်ရွေးကောက်ပွဲများအတွင် မဲအများစုအနိုင်ရရှိကာ ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ ပါတီအပြတ်အသတ်ဖြင့် အနိုင်ရရှိလာခဲ့သည်။ သို့သော် အစိုးရသစ်အနေဖြင့် နိုင်ငံပြန်လည်ထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းများကို လုပ်ဆောင်ရာတွင် အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့နေရလျက်ရှိပြီး အခြေခံအဆောက်အအုံပိုင်း မပြည့်စုံမှု၊ သယံဇာတကြွယ်ဝသော နယ်စပ်ဒေသများတွင် ပဋိပက္ခများဖြစ်ပေါ်နေမှု၊ စစ်တပ်၏ သြဇာသက်ရောက်နေမှုနှင့်အတူ ယနေ့နိုင်ငံစီးပွားရေးတွင် လွှမ်းမိုးချုပ်ကိုင်ထားဆဲဖြစ်သော ခရိုနီများရှိနေမှု စသည်တို့နှင့် ရင်ဆိုင်နေရသည်။ ယခုအခါ အရှေ့တောင်အာရှနိုင်ငံတွင် အရပ်သားအစိုးရဦးဆောင်သော အစိုးရတစ်ရပ်ထံသို့ အာဏာလွှဲပြောင်းပေးနိုင်ခဲ့ခြင်းကို သမိုင်းဝင်အရွေ့တစ်ခုအဖြစ် အသိအမှတ်ပြုသည့်အနေဖြင့် အရေးယူပိတ်ဆို့ထားသော ဘဏ္ဍာရေး၊ ကုန်သွယ်ရေး အတားအဆီးများကို ဖြေလျော့ပေးလိုက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း အမေရိကန်ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ထုတ်ပြန်သည်။ ၀ါရှင်တန်အစိုးရအနေဖြင့် စစ်အုပ်ချုပ်ရေးကုန်ဆုံးခဲ့သော ၂၀၁၁ ခုနှစ်နောက်ပိုင်းမှစ၍ နိုင်ငံ၏ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများကို အသိအမှတ်ပြုကာ ဖြေလျော့မှုများစွာ ပြုလုပ်လာခဲ့သော်လည်း အချို့အဖွဲ့အစည်းပုဂ္ဂိုလ်များကို နာမည်ပျက်စာရင်းတွင် ဆက်လက် ထည့်သွင်းထားဆဲဖြစ်ကာ နောက်ထပ် ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများနှင့် လူ့အခွင့်အရေးဆိုင်ရာ တိုးတက်မှုများ ဆက်လက်တွေ့မြင်ရရန် စောင့်ကြည့်နေသည်ဟု ဆိုသည်။
ယခုဖြေလျော့ပေးမှုများအပေါ် အစိုးရဘက်က ကြိုဆိုပါကြောင်း မြန်မာအစိုးရ ပြောရေးဆိုခွင့်ရပုဂ္ဂိုလ် ဦးဇော်ဌေးက ပြောသည်။
"ဒါဟာ နှစ်နိုင်ငံအကြား ကုန်သွယ်မှုပိုင်းကို ပိုမိုတိုးတက်သွားစေနိုင်သလို စီးပွားရေးတိုးတက်နိုင်မှု အလားအလာတွေအတွက် မျှော်လင့်ချက်တွေ ပိုအားကောင်းသွားစေပါတယ်" ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
အလားတူ ယခုဖြေလျော့မှုကြောင့် ပြည်ပကုမ္ပဏီများထံမှ လာရောက်ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုများ ပိုမိုတိုးပွားလာစေနိုင်သည်ဟုလည်း ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားသည်။ Coca-Cola ၊ Pepsi ၊ KFC ၊ Chevrolet နှင့် Ford တို့အပါအဝင် အမေရိကန်ကုမ္ပဏီများသည် မြန်မာနိုင်ငံတွင် လာရောက်အခြေချထားပြီးလည်း ဖြစ်သည်။ ယင်းအပြင် ယခုနောက်ဆုံးဖြေလျော့မှုများကြောင့် နိုင်ငံတွင် လာရောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံလိုသော အမေရိကန် စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက် ပိုမိုတွန်းအားပေးစေနိုင်ရန်လည်း ရှိနေသည်။
ယခုဖြေလျော့ခံရသူများထဲတွင် ယခင်စစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်မှုရှိ၍ စာရင်းထည့်သွင်းခံထားရသော နိုင်ငံပိုင်လုပ်ငန်းခုနစ်ခုလည်း ပါဝင်ကြောင်း အမေရိကန် ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးဌာနက ဆိုသည်။
အလားတူ နိုင်ငံပိုင်ဘဏ်သုံးခုကို ဆန်ရှင်စာရင်းမှ ပယ်ဖျက်ပေးလိုက်သကဲ့သို့ မြန်မာနိုင်ငံကဘဏ်များ အားလုံးကိုလည်း အမေရိကန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများနှင့် ချိတ်ဆက်ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။
အလားတူ ပြီးခဲ့သည့် ၂၀၁၅ ဒီဇင်ဘာလက ပြုလုပ်ခဲ့သည့် ခွင့်ပြုချက်တစ်ခုအရ လုပ်ငန်းများကို မြန်မာ့ဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်များမှတဆင့် ကုန်သွယ်ခွင့်တို့ကိုပါ ရရှိစေခဲ့သည်။
ယင်းဆိပ်ကမ်း၊ လေဆိပ်အများစုမှာ ဆန်ရှင်ချမှတ်ခံထားရသည့် ခရိုနီများလုပ်ကိုင်နေသော လုပ့်ငန်းများဖြစ်ပြီး ယင်းနောက် နိုင်ငံတွင်ကုန်စည်စီးဆင်းမှုပိုမိုလွယ်ကူချောမွေ့တော့မည်ဟု ယူဆရသည်။ ယခု ခွင့်ပြုချက်အရ ဆန်ရှင်ချမှတ်ခံထားရသည့် စတီဗင်လောနှင့် ၎င်း၏ အေးရှဝေါလုပ်ငန်းစုတို့က လုပ်ကိုင်နေသော ဆိပ်ကမ်းနှင့် နိုင်ငံတကာလေဆိပ်တို့သည်လည်း အကျုံးဝင်နေခဲ့သည်။ သို့သော် ဘိန်းဘုရင်လောစစ်ဟန်၏ သားဖြစ်သူ စတီဗင်လောအနေဖြင့် ယခုအချိန်တွင် ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့ခံထားရဆဲဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အေးရှဝေါကုမ္ပဏီနှင့်အတူ အခြားဆက်နွယ်နေသော လုပ်ငန်းခြောက်ခုတို့လည်း ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။ အလားတူ စစ်အစိုးရနှင့် ပတ်သက်ခဲ့သူများအပါအ၀င် လုပ်ငန်းလူပုဂ္ဂိုလ်တစ်စုလည်း ယခုထက်ထိ ဆန်ရှင်စာရင်းတွင် ပါဝင်နေဆဲဖြစ်သည်။ ယခုကဲ့သို့ အမေရိကန်တို့၏ အရေးယူပိတ်ဆို့မှု ဖြေလျော့မှုအပေါ် အေးရှားဝေါက တစ်စုံတစ်ရာ မှတ်ချက်ပြုရန်ငြင်းဆန်သွားခဲ့သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီသည်လည်း ဆန်ရှင်ပိတ်ဆို့မှုမှ လွတ်မြောက်နိုင်ရန် ကြိုးပမ်းနေသည့် လုပ်ငန်းများထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
ရန်ကုန်စတော့အိတ်စ်ချိန်းတွင် FMI စာရင်းသွင်း
First Myanmar Investment company သည် ပြီးခဲ့သည့် မတ်လက ရန်ကုန်စတော့အိတ်စ်ချိန်းတွင် စာရင်းသွင်းပါဝင်လာခဲ့သည်။
အများပိုင်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်သော FMI အနေဖြင့် စတော့အိတ်စ်ချိန်း ပထမနေ့ ယင်း၏ အစုရှယ်ယာများကို ရောင်းဝယ်ပေးခဲ့ပြီး အဖွင့်ဈေး ကျပ် ၂၆,၀၀၀ နှင့် ယင်းနေ့ကုန်တွင် အပိတ်ဈေး ၃၁,၀၀၀ ရှိခဲ့သည်ဟုသိရသည်။ ယင်းနေ့ ရှယ်ယာရောင်းဝယ်မှုပိတ်သိမ်းချိန်တွင် ကုမ္ပဏီ၏ ရှယ်ယာတန်ဖိုးပိုင်းတွင် ကျပ် ၅,၀၀၀ မြင့်တက်လာကြောင်း FMI ကုမ္ပဏီမှ Chief Financial Officerဦးထွန်းထွန်းက ပြောသည်။ FMI သည် ရန်ကုန်စတော့ဈေးကွက်တွင် ပထမဆုံးအကြိမ် ရောင်းဝယ်ခဲ့သည့် ကုမ္ပဏီလည်း ဖြစ်သည်။ စတော့ဈေးကွက်တွင် မဝင်ရောက်မီ ၂၀၁၆ ဇန်န၀ါရီလကုန်က FMI ၏ အစုရှယ်ယာများကို တန်ဖိုးကျပ် ၃၆,၀၀၀ ခန့်ဖြင့် ရောင်းဝယ်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် ရှယ်ယာရှင်များကို အဆင်ပြေစေရန်အတွက် စတော့ဈေးကွက် ပထမနေ့တွင် ကျပ် ၂၆,၀၀၀ ဖြင့် ပြင်ဆင်သတ်မှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဦးထွန်းထွန်းက ဆိုသည်။
"ရန်ကုန်စတော့ဈေးကွက်ကြီးကြပ်ရေးကော်မတီကလည်း ကျွန်တော်တို့ရဲ့ ရှယ်ယာအသွားအလာကို စိစစ်တယ်၊ ကုမ္ပဏီရဲကတန်ဖိုးပိုင်းကိုပါ စစ်ဆေးခဲ့သလို ပြီးတော့မှ အဖွင့်ဈေးကို ပျမ်းမျှ တွက်ချက်သတ်မှတ်ပေးခဲ့တာပါ" ဟု ၎င်းက ပြောသည်။
FMI ကုမ္ပဏီသည် လုပ်ငန်းခွဲပေါင်းများစွာရှိသည့် လုပ်ငန်းစုတစ်ခုဖြစ်ကာ စင်ကာပူစတော့ဈေးကွက်စာရင်းဝင် Yoma Strategic Holdings နှင့်ချိတ်ဆက်မှုရှိကာ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အကြီးဆုံးသော ကုမ္ပဏီများထဲမှ တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ယင်းကုမ္ပဏီသည် နိုင်ငံတွင် နှစ်ပေါင်း ၂၀ ကျော်ကြာ တက်ကြွစွာပါဝင်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပေးထားကာ ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးလုပ်ငန်းကုမ္ပဏီအချို့နှင့်လည်း joint ventures များ ထူထောင်ထားရှိသည်။ ကုမ္ပဏီအနေဖြင့် ရှေ့ဆက်လက်၍ ဘဏ္ဍာရေးဝန်ဆောင်မှုနှင့် ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုကဏ္ဍများတွင် အလေးပေးလုပ်ဆောင်မည်ဟု ဦးထွန်းထွန်းက ပြောသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ဖွံ့ထွားကြီးထွားလာနေသော ခရီးသွားလုပ်ငန်းကဏ္ဍတွင် အလုပ်အကိုင်အရေအတွက်ပေါင်း ၂၀၁၅ ခုနှစ်က ၄၂၄,၄၅၀ ထိ မြင့်တက်လာခဲ့သည်ဟု ယူဆရသည်။ ဟိုတယ်နှင့် ခရီးသွားလာရေးဝန်ကြီးဌာနက ချမှတ်ထားသည့် မာစတာပလန်အရလည်း လာမည့် ၂၀၂၀ မတိုင်ခင် လုပ်ငန်းအတွင်း အလုပ်အကိုင်အရေအတွက်ပေါင်း ၁ ဒသမ ၄၉ သန်းထိ တိုးတက်လာမည်ဟု မျှော်လင့်ရသည်။ ယင်းနှုန်းထားသည် လာမည့် ငါးနှစ်တာအတွင်း မြန်မာအလုပ်အကိုင်နေရာ အရွယ်အစားအားဖြင့် ၃၅၁ ရာခိုင်နှုန်းထိ တိုးတက်လာမည့် သဘောပင်ဖြစ်သည်။ ယေဘုယျအားဖြင့် ခရီးသွားလာရေးနှင့် ဧည့်ခံကြိုဆိုရေးလုပ်ငန်းမှာ မြန်မာနိုင်ငံအတွက် စီးပွားရေးအရ အခွင့်အလမ်း အမြောက်အများကို ပေးအပ်နိုင်ရန်ရှိနေသည်။ သို့သော်လည်း လူသားအရင်းအမြစ် ရှားပါးမှုပြဿနာက ယင်းလုပ်ငန်းအတွက် အဓိကကြုံတွေ့နေရသည့် ပြဿနာလည်း ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နေ နိုင်သည်။ အလုပ်အကိုင်အခွင့်အလမ်း များပြားလာသည့်အလျောက် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုလုပ်ငန်းများရှိအလုပ်အကိုင်နေရာများအတွက် သင့်တော်ကိုက်ညီမည့် အရည်အချင်းရှိ လုပ်သားရှားပါးမှုလည်း ရှိနေသည်။
Hilton Worldwide အနေဖြင့် ၂၀၁၄ ခုနှစ်က မြန်မာနိုင်ငံသို့ စတင်ဝင်ရောက်လာခဲ့ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဟိုတယ်လုပ်ငန်းနှစ်ခုကို လုပ်ကိုင်နေပြီး ယင်းတို့မှာ Hilton Nay Pyi Taw နှင့် Hilton Resort & Spa Ngapali တို့ဖြစ်သည်။ လာမည့် ၂၀၁၉ မတိုင်ခင် နောက်ထပ်လုပ်ငန်းလေးခု ထပ်မံဖွင့်လှစ်လုပ်ကိုင်ရန် စီစဉ်ထားသည်။
မြန်မာနိုင်ငံတွင် ရေရှည်ကာလကျွမ်းကျင်အရည်အသွေးပိုင်းတိုးတက်နိုင်စေရန်အတွက် ယခုနှစ်အတွင်း နေပြည်တော်တွင် Hilton အသက်မွေးမူသင်ကြားရေးစင်တာကို Hilton Worldwide က ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သည်။ ဟိုတယ်လုပ်ငန်းတစ်ခုက ဖွင့်လှစ်ပေးခဲ့သော ယင်းကဲ့သို့ စင်တာမျိုးသည် နိုင်ငံတွင်ပထမဆုံးလည်း ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ လေ့ကျင့်ရေးစင်တာအနေဖြင့် ဟိုတယ်ခရီးသွား လုပ်ငန်းအတွင်းရှိ အစားအသောက်နှင့်အဖျော်ယမကာ၊ အချက်အပြုတ်၊ မီးဖိုချောင်ကျွမ်းကျင်မှု စသည့်လုပ်ငန်းနယ်ပယ်များအတွင်း ပြည်တွင်းမှ လူငယ်များကို အရည်အချင်းပြည့်ဝတတ်မြောက်စေမည့် သင်တန်းများကို ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။ ယခုနှစ်အစောပိုင်းကလည်း ဧည့်ခံကြိုဆိုရေး စီမံခန့်ခွဲမှုသင်တန်းသားဦးရေ ၄၀ ကို ပထမသုတ်အနေဖြင့် လက်ခံသင်ကြားပေးနိုင်ခဲ့သည်။
မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ လက်ရှိစီးပွားရေးကဏ္ဍမှာ ရရှိထားတဲ့ တိုးတက်မှုတွေအပေါ် ကမ္ဘာ့ဘဏ်ဘက်က အကောင်းမြင်လျက်ရှိကြောင်း နိုဝင်ဘာလက ထုတ်ပြန်ခဲ့တဲ့ Doing Business report အစီရင်ခံစာတစ်စောင်ရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ သိရပါတယ်။ ဒါကြောင့်လည်း ဒီအကြောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်ရဲ့ special private sector specialist Charles Schneider နဲ့ မဇ္ဈိမမှ ကိုအောင်သူရတို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခဲ့မှုကို ဖော်ပြလိုက်ရပါတယ်။
Q- ယခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးအခြေအနေအပေါ် ဘယ်လိုမျိုး သုံးသပ်ပေးချင်ပါသလဲ?
World Bank - ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒီနှစ်ရဲ့ Doing Business report နဲ့ပတ်သက်လို့ အကောင်းမြင်စရာအချက်တွေ အများကြီးရှိနေတယ်ဆိုပြီးတော့ပေါ့လေ၊ ဒီ Doing Business report အစီရင်ခံစာအဆင့်သတ်မှတ်ချက်တွေထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံ ထည့်သွင်းခံရတာ လေးကြိမ်မြောက်ရှိခဲ့ပါပြီ။ ဒီလေးနှစ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံဟာ တကယ့်ကိုပဲ ကောင်းကောင်းလုပ်ထားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ အဓိကကောင်းခဲ့တဲ့ နယ်ပယ်တွေထဲမှာဆိုရင် အသေးစားနဲ့အလတ်စား လုပ်ငန်းတွေ၊ ပြည်တွင်း စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေကို တိုးတက်အောင် ထောက်ပံ့ပေးနိုင်ခဲ့တာမျိုး၊ ပြောရရင် ဒီလုပ်ငန်းတွေ ဘယ်လိုမျိုး စလုပ်ရမလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုမှတ်ပုံတင်ပြီး ပူးပေါင်းလုပ်ကိုင်နိုင်မလဲဆိုတာကို ပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပြီးခဲ့တဲ့ သုံးနှစ်အတွင်း ဒါက သိသိသာသာ တိုးတက်လာခဲ့ပါတယ်၊ မနှစ်တုန်းကဆိုရင် မြန်မာဟာ ဒီနယ်ပယ်ကဏ္ဍမှာ ကမ္ဘာ့နံပါတ်ဝမ်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲသူတောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ မြန်မာဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ နှစ်နှစ်အတွင်း ကမ္ဘာပေါ်မှာ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအရှိဆုံးလို့ ပြောလို့ရပြီး ဒါကြောင့်မို့လည်း ဒီ Doing Business report မှာ ဖော်ပြခံရတာပါ၊ ဒါကြောင့် ဒီနယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေမှာ ကောင်းထားခဲ့တယ်လို့ ပြောချင်ပါတယ်။
ဒါ့အပြင် ခုနှစ်အတွင်း တိုးတက်မှုတွေရှိထားခဲ့တဲ့ ဘဏ္ဍာရေးနယ်ပယ်ထဲ ၀င်ရောက်ပတ်သက်ခွင့်ရရှိမှုပိုင်းမှာလည်း ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ တိုးတက်မှုတွေ တွေ့မြင်ထားရတယ်။ လုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ ခုလို ဘဏ္ဍာရေးပိုင်းနဲ့ ချိတ်ဆက်နိုင်ပြီး ငွေတွေ ချေးယူရတဲ့အပိုင်းမှာ ပိုမိုလွယ်ကူလာတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံက အသေးစားနဲ့ အလတ်စားလုပ်ငန်းတွေအတွက် ဒါဟာ အရေးကြီးတဲ့အချက်ပါပဲ၊ ဒါကြောင့် ခုတွေ့မြင်ရတာကတော့ ကောင်းတဲ့လက္ခဏာရပ်တွေပါ။
နောက်ထပ်လည်း မြန်မာအစိုးရအနေနဲ့ ဒီ Doing Business report ကို ဘယ်လောက် အလေးထားသလဲ၊ ဒီအစီရင်ခံစာထဲမှာ ဖော်ပြထားတာတွေကို သူတို့နားလည်နိုင်ပြီး သူတို့ဘယ်လို အလေးထားလုပ်ဆောင်သလဲ ဆိုတာနဲ့ ဘယ်လိုမျိုး တိုးတက်အောင်လုပ်မလဲဆိုတဲ့အချက်ကလည်း နောက်ထပ်ကောင်းတဲ့ လက္ခဏာလို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။
Q- ပြည်သူပိုင်စီးပွားရေးကဏ္ဍ တိုးတက်ဖို့ အစိုးရသစ်အနေနဲ့ ဘာတွေလုပ်ဖို့လိုပါသလဲ?
World Bank - အစိုးရသစ်အနေနဲ့ အရေးတစ်ကြီးလုပ်ရမှာက ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေအတွက် ၀န်ကြီးဌာနအားလုံးနဲ့ တစ်စုတစ်စည်းတည်းပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ စီးပွားရေးကဏ္ဍတစ်ခုမှာပဲ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှု အနည်းငယ်လောက်ပဲ လုပ်နိုင်တယ်ဆိုရင် အဓိကတာဝန်ရှိတာက ဝန်ကြီးဌာန သို့မဟုတ် အေဂျင်စီမှာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်အားဖြင့်တော့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုအတွက် အများအပြား ပါဝင်လုပ်ဆောင်ကြရပါတယ်။ လုပ်ငန်းကုမ္ပဏီတစ်ခုအနေနဲ့ ၀န်ကြီးဌာနတွေ ဒါမှမဟုတ် အေဂျင်စီ တော်တော်များများနဲ့ ပတ်သက်ချိတ်ဆက်ရတတ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေး လုပ်ငန်းစဉ်ရဲ့ အရေးကြီးတဲ့အချက်က ဒီလိုမျိုးချိတ်ဆက်ဆောင်ရွက်မှုတွေအတွက် အားကောင်းတဲ့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးအဖွဲ့တစ်ခု ရှိထားဖို့ပါ။ ဒီနေရာမှာ စီးပွားရေးနဲ့ ကုန်သွယ်မှုတိုးမြင့်ရေးဆိုင်ရာ အထူးလုပ်ငန်းအဖွဲ့တ်စခုလည်း ထူထောင်ထားရှိတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီအဖွဲ့က ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေကို ဘယ်လိုမျိုး တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်မလဲဆိုတာကို သိနိုင်ဖို့ ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်တဲ့အဖွဲ့ပါ။ ဒါကြောင့် ဒီအဖွဲ့ကို ပိုအားကောင်းစေဖို့၊ ပိုပြီးအဆင့်မြင့်လယ်ဗယ်တစ်ခုကို ရောက်စေဖို့၊ အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေ ပါဝင်နိုင်ရပါမယ်။ ဒီအချက်ကတော့ တိုးတက်မှုတွေဖြစ်ထွန်းစေနိုင်မယ့် အချက်လို့ ထင်ပါတယ်။
နောက်ပြီး မလေးရှားလိုမျိုး အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံတွေကိုလည်း ကျွန်တော်တို့ ကြည့်ပြီးလေ့လာလို့ ရပါတယ်။ အဲဒီမှာ Pemuda လို့ ခေါ်တဲ့ အဖွဲ့တစ်ခုကို ထူထောင်ပြီး သူတို့အောင်မြင်မှုရနေပါတယ်။ အဲဒီအဖွဲ့အစည်းကတော့ အစိုးရအဖွဲ့က အဆင့်မြင့်ပုဂ္ဂိုလ်တွေအထိ အစီရင်ခံစာတွေ တင်သွင်းရပြီး ပူးပေါင်းညှိနှိုင်းမှုအားကောင်းတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီလိုမျိုးအဖွဲ့အပြင် အစိုးရအနေနဲ့ အစိုးရ-ပုဂ္ဂိလိကကဏ္ဍ အပြန်အလှန်ဆွေးနွေးမှုတွေ လုပ်ဖို့ကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင် Myanmar Business Forum ကို ထူထောင်ထားတဲ့အတွက် ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍအနေနဲ့ ယင်းကိုအသုံးပြုပြီးတော့ အစိုးရနဲ့ ပုံစံတကျဆွေးနွေးနိုင်မယ့် ထိရောက်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုလည်း ဖြစ်နေတာကို တွေ့ရပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော်အကြံပေးချင်တာရှိပါတယ်၊ အဲဒါကတော့ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီ ဖိုရမ်ကို ဆက်ပြီး အသုံးပြုပြီးတော့ နိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးကို ပိုမိုတိုတးက်စေနိုင်မယ့် နည်းလမ်းတစ်ခုအဖြစ် ပိုမိုဖန်တီးလုပ်ဆောင်သွားဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။
Q- အစိုးရရဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒအပေါ် ဘယ်လိုထင်မြင်ပါသလဲ?
World Bank - ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ ဒါတကယ်ကောင်းပါတယ်။ ခုချိန်မှာ အစိုးရဟာ ရှင်းလင်းသေချာတဲ့ စီးပွားရေးမူဝါဒတွေနဲ့ ပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါပြီ၊ ရည်မှန်းချက်ထားတဲ့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေဟာလည်း မှန်ကန်တယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်။ သူတို့အလေးထားတဲ့ နယ်ပယ်ကဏ္ဍတွေထဲမှာဆိုရင် စိုက်ပျိုးစီးပွားနဲ့ လယ်ယာစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းတွေလိုမျိုး အရေးပါတဲ့နယ်ပယ်တွေပါသလို ပုဂ္ဂလိကဏ္ဍအတွက် စီးပွားရေးးလုပ်ကိုင်ခွင့်လွယ်ကူစေမယ့် အသိုက်အဝန်းတစ်ခု တိုးတက်ဖန်တီးနိုင်ရေးလည်း ပါရှိနေပါတယ်။ ဒီမူဝါဒမှာ အဓိက အလေးထားတာကတော့ လုပ်ငန်းနယ်ပယ်တွေထဲမှာ တိုးတက်မှုအမှန်တကယ်ရဖို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဥပမာအနေနဲ့ ကုန်သွယ်မှုပိုင်းကို ကြည့်ရင်မြင်နိုင်ပါတယ်။ ဒီနိုင်ငံမှာ ကုန်သွယ်မှုပမာဏပိုင်းမှာဆိုရင် တိုးတက်မှုတွေ ဖြစ်ထွန်းနေသလို သွင်းကုန်ရော ပို့ကုန်မှာပါ တိုးတက်ဖွံ့ထွားနေလျက်ရှိပါတယ်။ ခုဆိုရင် ဆိပ်ကမ်းတွေမှာ ကွန်တိန်နာတွေ ပြည့်ကျပ်လာတာမျိုးတွေဖြစ်နေသလို ဒီအကြောင်းကိုလည်း ခုနှစ် Doing Business report မှာ ရွေးချယ်ဖော်ပြခဲ့သလို ဒီလို ပြည့်ကျပ်မှုကို ဘယ်လိုမျိုး လျော့ချရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းမှာ တိုးတက်မှုတွေ ရှိဖို့လည်း လိုအပ်ပါတယ်။ ဒါကို ရှင်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်းကတော့ အလိုအလျောက်စနစ်တွေ သုံးတာ၊ ပိုမိုမြန်ဆန်တဲ့ လက်ခံ အသွင်းအထုတ် ရှင်းလင်းရေးစနစ်တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒီအတွက်လည်း နည်းစနစ်တွေ၊ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းလမ်းတွေ၊ လုပ်ထုံးလုပ်နည်းစနစ်တွေ ရယူရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်၊ အစိုးရအနေနဲ့ ဒီအပိုင်းကို စပြီး အလေးထားကြည့်ရှုနေပြီဖြစ်သလို ကျွန်တော်တို့ ကမ္ဘာ့ဘဏ်အနေနဲ့လည်း မြန်မာအစိုးရရဲ့ အားထုတ်ကြိုးပမ်းမှုတွေကို ထောက်ခံအားပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။
dawnmanhon: ၂၀၁၆ စီးပွားရေး အနှစ်ချုပ်